मुन्द्रेले छोराको मग्नी भईसक्यो, भन्दा दीपा भुतुक्कै - Gufgaf : Nepal ko entertainment web site : Nepali cinema & Gossip : Nepali comedy : Video & jokes : celebrity interview : Nepali art ,music , manoranjan & more
२३ असार,२०७४ | Forseenetwork
दीपक राज गिरीका छोराको विहे पार्टीमा दीपाश्री लगायतका हाँस्यकलाकार नदेखिएपछि हिजो बिहिबार काठमाण्डौको तारे होटेल अन्नपूर्णमा एकैछिन कानेखुशी चल्यो । अवार्ड बहिष्कारको आरोप लागेका दीपकराजको छोराको विवाहमा दीपाश्रीसँगै छक्का पञ्जाका हाँस्यकलाकार नै नदेखिएपछि शंका फैलिनु स्वभाविक थियो । कतै विहे पार्टी पनि बहिष्कार त हैन ? शुभ चिन्तकका मनमा यो प्रश्न आउनु अचम्म पनि थिएन । तर बिहिबारको वास्तविकता अर्कै थियो ।
दीपकराज गिरीले अन्नपूर्ण होटेलमा निम्तालुलाई स्वागत गरिरहँदा दीपाश्री निरौला सहित हाँस्यकलाकारको अर्को टोली डि सिने अवार्डका लागि हेटौडामा थियो । गिरीका छोराको विहे भोज र अवार्ड कार्यक्रम एकैदिन जुधेपछि तारे होटेलमा अलमल भयो । यता काठमाण्डौमा भोज चलिरहँदा छक्का पञ्जाका कलाकारहरु हेटौडामा अवार्ड थाप्दै थिए ।
छक्का पञ्जा निर्माताका हिसाबले दीपक राजका लागि छोराको विवाह जत्तिकै महत्वपूर्ण डि सिने अवार्ड रह्यो । छक्का पञ्जाले ११ विधामा डि सिने अवार्ड उचालेको छ । दीपकले अवार्डको खुशी दुई दिन पछि साट्ने छन् । तर अवार्ड कार्यक्रमका साक्षीहरुलाई भने जितु नेपाल मुन्दे्रले भुँडी फुट्ने गरी हँसाए । स्टेजमा जितु नेपाल चल्तीको सिनेमा गीतलाई रिमेक गर्दै गाउँदै थिए, मनै सफा छ मेरो केशै कालो छ, छोराको मग्नी भईसक्यो मेरै पालो छ ।
गिरी पुत्रको विवाह प्रसंगमाथि मुन्द्रेले झटारो हानीरहँदा दीपाश्री भुतुक्कै थिईन् । ‘जुंगा हल्लियो कुरा बुझियो’ भनेजस्तै मुन्द्रेको गीत दीपाश्री माथिको व्यङग्य थियो । मुन्द्रेले लगातार अवार्ड कार्यक्रममा हँसाईरहँदा दीपाश्री लजाईरहेकी थिईन् । यहि प्रसंगमा दीपालाई हामीले सोध्यौँ, ‘तपाईँको पालो आएकै हो त ? यसको जवाफमा उनले भनिन्, कमेडियनले गर्ने व्यङग्य नैे हो । जितुले झटारो हानेको हैन मलाई माया गरेको हो । हामी दुःख गरेर उभिएका कलाकार हौँ । सायद जितुलाई दिदीको माया लागेको हो । जहाँसम्म पालोको कुरा छ, यो चाहि शुचभिन्तकको माया पनि हो । पर्दामा दीपक जी र मलाई दर्शकले मन पराईदिनु भएको छ । त्यहि भएर धनिया र रामबिलास सफल भयो । तितो सत्य सफल भयो । ६ एकान ६ देखि छक्का पञ्जा २ सम्मको यात्रा अघि बढाउन सकियो । हामी मिल्न सक्यौँ र देश र दुनियाँलाई हँसाउन सक्यौँ । अरुलाई हँसायौँ आफू हाँस्न सक्यौँ । यो व्यङग्य मात्र हैन यो माया पनि हो । त्यसैले व्यक्तिगत रुपमा म चाहन्छु यो सम्बन्ध यस्तै रहोस् ।’
निर्माता तथा कलाकार दीपक राज गिरीले अबका दिनमा सिनेमा सम्बन्धि हुने कुनैपनि अवार्ड कार्यक्रममा सहभागिता नजनाउने निर्णय गरेका छन् । पछिल..